.တနိုင်ငံလုံးမျှော်နေတဲ့ ရွှေမိုးလာပါပြီ – Askstyle
့၁၉ ၅ ၂၀၁၉ရက် မနက် နိုင်ငံအောက်ပိုင်းကို စတင် ၀င်ရောက်လာတဲ့ မိုးဟာ ၂၀ ရက်နေ့မှာ နိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မိတ္ထီလာ ကျောက်ပတောင်းအထိ တက်လာပြီး နေရာကွက်ကြား ရွာသွန်းကာ..
၂၁ ရက်နေ့ မှတော့ ရှမ်းတောင် ကယား နဲ့နေပြည်တော်မှ အောက်ပိုင်းဒေသများ သဲသဲ မဲမဲရာံသွန်းမှာဖြစ်လို့ရန်ကုန်သားများ မြောင်းရှင်းထားကြဘို့ လိုကြောင်းပါ..
အ်ိမ် အမိုးပြင်နေသူများလည်း နက်ဖန် ၂၀ ရက် အပြီးပြင်ထားကြပါဗျာ….
၂၃ရက်နေ့မှာတော့ တပြည်လုံး အနှံရွာသွန်းပြီး အစိမ်းရောင် အနီရောင်များကတော့ နေရာကွက်ပြီး မိုးထစ်ချုန်းရွာနိုင်သောဒေသများဖြစ်ပါတယ်။
မေလကုန်သည်အထိ ရက်ဆက်ရွာသွန်းမယ့်အခြေအနေပါနိုင်ငံတောင်ပိုင်း မြောက်ပိုင်းများ ရေကြီးရေလျှံ နိုင်သောကြောင့် လမ်း တံတားများ အထူးသတိထားရပါ့မယ်.
အလယ်ပိုင်းဒေသများ မိုးရွာလိုက် နေပူလိုက်နဲ့ အနေခက်မယ်..
ယခုရွာမယ့်မိုးသည် ရေအားလျှပ်စစ်မီးအတွက် ကောင်းနိုင်ပေမယ့် မိုးရွာရင် မီးပျက်တတ်တဲ့ လိုင်းတွေ ကြိုပြင်ထားသင့်ပါကြောင်း အကြံပြုပါရစေ…
အလည်အပတ် ဘုရားဖူးခရီးသွားများအတွက် အခက်အခဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မုတ်သုံလေ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းသို့ ဝင်ရောက်ပြီဟု ဦးထွန်းလွင်ပြော
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊မေလ (၂၀) ရက်နေ့ အတွက် မိုးလေ၀သခန့်မှန်းချက်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တွင် မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်မှု အ ခြေ အ နေ။
အ နောက်တောင်မုတ်သုံလေ၀င်ရောက်နိုင်မှု အ ခြေ အ နေ။
အ နောက်တောင်မုတ်သုံလေသည် မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသများသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ မြစ်ဝ ကျွန်းပေါ် ဒေသများသို့ ဆက်လက်ဝင်ရောက်လျက် ရှိနေပါတယ်။
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြ င် အ ခြေ အ နေ။ (၁၉-၅-၂၀၁၉)ရက် နံနက် (၀၉း၀၀) နာရီအချိန်KALPANA_1ဂြိုဟ်တုမှတိုင်းတာပေးချက်အရ၊ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင် နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ် အော် အရှေ တာင်ပိုင်း တို့မှာ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ် ထွန်း နေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် မှာ တိမ်အနည်းငယ် ဖြစ် ထွန်း နေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း နှင့် တောင်ပိုင်း ဒေသတွေမှာ တိမ်အ သင့်အတင့် မှ တိမ်ထူထပ် နေပြီး၊ ကျန်ဒေ သ တွေမှာ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ် ထွန်း နေပါတယ်။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်အ ခြေ အ နေ။
မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်း နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ လှိုင်းအနည်း ငယ်သာ ရှိပါမယ်။ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်း နှင့် ကမ်း လွန် ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ (၁) ပေ မှ (၂) ပေ ခန့် ရှိနိုင်ပါတယ်။
ချင်းပြည်နယ် နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) တို့မှာ 28°C မှ 32°C ခန့်၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ ရှမ်းပြည်နယ်( အ ရှေ့ပိုင်း)၊ ကယားပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည် နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ် နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး တို့တွင် 33°C မှ 37°C ခန့်၊၊ကျန် ဒေ သ တွေမှာ 38°C မှ 43°C ခန့်အထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။
တစ်ပြည်လုံး မှာ ခရမ်း လွန်ရောင်ခြည် အညွှန်း ကိန်း လွန်ကဲ အဆင့် တွင်ရှိနိုင်ပါတယ်။
မိုးတိမ်တောင်များဟာ ပဲခူးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ တနင်္သာရီဆိုင်း၊ ကယားပြည်နယ်၊ တို့တွင် နရာအနှံ့အပြားဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး၊ ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မ ကွေးးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း တို့တွင် နေရာကျဲကျဲဖြစ် ထွန်း နိုင်ပြီး၊ကျန်ဒေ သ တွေမှာတော့ မိုးတိမ်တောင်များကင်းစင်နိုင်ပါတယ်။
မိုး ရွာ သွန်းမှု အ ခြေ အ နေခန့်မှန်းချက်။
မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး နှင့် တနင်္သာ ရီတိုင်းဒေသကြီး တို့မှာ ကချင်ပြည်နယ် ၊ချင်းပြည်နယ် ၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မ ကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တို့ တွင် နေရာ
ကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်း ရွာ နိုင်ပြီး၊ကျန်ဒေ သ တွေမှာ တိမ်အသင့်အတင့် ဖြစ် ထွန်း နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ဒေသ တွေမှာ ထစ်ချုန်းမည့် အ ခြေ အ နေ ဖြစ်ပေါ် နိုင်ပါတယ်။
Credit – ဒေါက်တာ ထွန်း လွင်